ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို နက္ခတ်တာရာ ဂြိုလ်စီး၊ဂြိုလ်နင်း ပညာရပ်များအနက် ကဏ္ဍတစ်ခုအား သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပါက အမှန်တကယ်ပင် ၎င်းသည် ဂျာဒူပယောဂ၏ ကဏ္ဍတစ်ခုကို သင်ယူခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (သင်ယူမှု)များလာသည်နှင့်အမျှ (ဂျာဒူပယောဂအတတ်လည်း) များလာမည်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို နက္ခတ်တာရာ ဂြိုလ်စီး၊ဂြိုလ်နင်း ပညာရပ်များအနက် ကဏ္ဍတစ်ခုအား သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပါက အမှန်တကယ်ပင် ၎င်းသည် ဂျာဒူပယောဂ၏ ကဏ္ဍတစ်ခုကို သင်ယူခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (သင်ယူမှု)များလာသည်နှင့်အမျှ (ဂျာဒူပယောဂအတတ်လည်း) များလာမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . အမည်နာမများနှင့် အမိန့်ပညတ်ချက်များ။ . အစ္စလာမ်ပျက်စေသောအရာများ။ .
[صحيح] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]
အစ်ဗ်နုအဗ္ဗာစ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ မည်သူမဆို နက္ခတ်တာရာ ဂြိုလ်စီး၊ဂြိုလ်နင်း ပညာရပ်များအနက် ကဏ္ဍတစ်ခုအား သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပါက အမှန်တကယ်ပင် ၎င်းသည် ဂျာဒူပယောဂ၏ ကဏ္ဍတစ်ခုကို သင်ယူခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (သင်ယူမှု)များလာသည်နှင့်အမျှ (ဂျာဒူပယောဂအတတ်လည်း) များလာမည်ဖြစ်သည်။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဆွဟီးဟ် အဆင့်ရှိသည်။ - အိဗ်နုမာဂျဟ်ကျမ်း။
အကွယ်အကြောင်းအရာများကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိမိတစ်ပါးတည်းအတွက်သာ သီးသန့် သတ်မှတ်ထားသဖြင့် ထိုလျှို့ဝှက်ချက်များကို စူးစမ်းလေ့လာရန် ကြိုးစားမှုတိုင်းကို တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က တားမြစ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုတားမြစ်ချက်တွင် ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို အသုံးပြု၍ မြေပထဝီ၌ (အကောင်း၊အဆိုး)အဖြစ်အပျက်များကို ခန့်မှန်းသည့် နက္ခတ်ဗေဒ ဂြိုလ်စီး၊ဂြိုလ်နင်း ပညာရပ်လည်းပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုပညာရပ်ကိုသင်ယူခြင်းသည် ဂျာဒူပယောဂ ပညာရပ်အမျိုးအစား တစ်မျိုးကို သင်ယူခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ရှင်းပြတော်မူခဲ့သည်။ လူသားတွင် ထိုပညာရပ်တိုးလာသည့်နှင့်အမျှ ဂျာဒူပယောဂအတတ်လည်း တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
ကြယ်တာရာများ၊ ဂြိုလ်များ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အနာဂတ်အကြောင်း ဟောကြားသည့် နက္ခတ်ဗေဒ ပညာရပ်အား တားမြစ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ဟောကြားခြင်းသည် အကွယ်၏ အသိပညာရှိကြောင်း ကြွေးကြော်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
နက္ခတ်ဗေဒ ဂြိုလ်စီး၊ဂြိုလ်နင်း ပညာရပ်သည် ဂျာဒူပယောဂ အမျိုးအစားအနက်မှပင်ဖြစ်ပြီး သောင်ဟီးဒ်တရားတော်နှင့် ဆန့်ကျင်သည်။
နက္ခတ်ဗေဒ ဂြိုလ်စီး၊ဂြိုလ်နင်း ပညာရပ်ကို ပို၍ သင်ယူလာသည်နှင့်အမျှ ဂျာဒူပယောဂအတတ် သင်ယူမှုတိုးလာမည်ပင်ဖြစ်သည်။
ဂျာဒူပယောဂအတတ်တွင် အမျိုးအစားများစွာ ရှိသည်။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . အမည်နာမများနှင့် အမိန့်ပညတ်ချက်များ။ . အစ္စလာမ်ပျက်စေသောအရာများ။ .
တစ်ရက်တွင် ကျွန်တော်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်ထံ၌ ထိုင်နေကြစဉ် လွန်စွာဖြူဖွေးသည့်အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ထားပြီး အလွန်မည်းနက်သော ဆံပင်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ကျွန်တော်တို့ရှေ့၌ ရုတ်တရက် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုသူ၌ ခရီးထွက်လာသည့်လက္ခဏာ မတွေ့ရသလို ကျွန်တော်တို့ထဲတွင် သူ့ကိုသိသူ တစ်ဦးမျှလည်းမရှိပေ။
အို - ငါအရှင်၏ကျွန်အပေါင်းတို့ ငါအရှင်မြတ်သည် မတရားမှုကို မိမိအပေါ်တွင် ဟရာမ် အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတော်မူသည်။ ထို့အတူ အသင်တို့ ကြား၌လည်း ၎င်းအား ဟရာမ်အဖြစ် သတ်မှတ်တော်မူလိုက်သည်။ သို့ရှိရာ အသင်တို့အချင်းချင်း မတရားမှုမပြုကြလေနှင့်။ အို - ငါအရှင်၏ကျွန်အပေါင်းတို့ ငါအရှင်လမ်းမှန်တရားချီးမြှင့်သူမှအပ အသင်တို့အားလုံးသည် လမ်းမှားနေကြသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့ရှိရာ အသင်တို့သည် ငါအရှင့်ထံတော်ပါးတွင် လမ်းမှန်တရားကို တောင်းခံကြလေကုန်၊ ငါအရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား လမ်းမှန်တရား ချီးမြှင့်တော်မူမည်။
ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မတရားပြုသူအား အချိန်ဆိုင်းငံ့ခွင့် ပေးထားတော်မူသည်။ အရှင်မြတ်က ၎င်းအား အရေးယူသည့်အခါ လွတ်မြောက်ခွင့် ပေးမည်မဟုတ်ပေ။
အတိတ်နမိတ်ဆိုးကောက်သူ၊ အတိတ်နမိတ်ဆိုးကောက်ပေးသူ၊ ဗေဒင်လက္ခဏာကြည့်သူ၊ ဗေဒင်လက္ခဏာကြည့်ပေးသူ၊ ဂျာဒူပယောဂပြုသူ၊ ဂျာဒူပယောဂပြုပေးသူတို့သည် ငါကိုယ်တော်၏ နောက်လိုက်သားတို့အနက်မှမဟုတ်ပေ။ မည်သူမဆို အကွယ်ရှိအကြောင်းအရာများကို ဟောကြားသူထံသွား၍ ၎င်း၏ ဟောကြားချက်ကို ထောက်ခံခဲ့လျှင် ထိုသူသည် တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အပေါ် ချပေးခဲ့သည့်အရာ (ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်)ကို ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မည်သူမဆို အကွယ်ရှိအကြောင်းအရာများကို ဟောကြားသူထံသွား၍ တစ်စုံတစ်ရာ မေးမြန်းကာ ၎င်းအား ထောက်ခံခဲ့လျှင် ရက်ပေါင်း လေးဆယ်တိုင် ထိုသူ၏ ဆွလာသ်လက်ခံခြင်းခံရမည် မဟုတ်ပေ။
عربي English Français Español اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی हिन्दी සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း